Muva nje eziningi udumo olutholakele njengomuntu ishaja nge amabhethri welanga leli thuluzi. Kulesi sihloko sizohlola lokho yilezo amadivayisi, abakwenzayo nalokho imingcele kudingeka ukuba banake lapho ukhetha amacala welanga. Kodwa okokuqala, umbono omncane.
Emhlabeni njalo uthola kusukela ilanga emisebeni ngempela enamandla - engaphezu kuka-1000 Watts ngamunye imitha square. Photocells ngibonga kule ecucuza elikhanyayo ungase uthole 90-140 Watts nge imitha elilodwa. panel Solar ababuthelwa amangqamuzana enjalo solar, zingabantu converters yamandla okukhanya ibe amandla kagesi.
Manje cabanga ishaja ku solar-powered , futhi izici zako ezisemqoka lobuchwepheshe. Umngcele we-main amadivayisi sinjalo kudivayisi amandla okukhipha kusukela icala lakhe izinga kuzoncika ibhethri ixhunyiwe noma solar kungenzeka ibhethri "powering" i isisetjenziswa se-elektroniki. Isikhathi esining impela ishaja Solar amazwe ine elincane endaweni photovoltaic amaseli, kodwa linezingxenye abaningi ngoba amabhethri. Kusolwa ukuthi idivayisi uyakwazi ngokushesha ukushaja wonke amadivayisi axhunyiwe. Kodwa lokhu kumane nje uhlakaniphile ukumaketha iqhinga. Izinga langempela kwenkokhiso kuncike endaweni izingqimba wezithombe ngokufanele amandla okukhipha. It kuvela ukuthi ishaja ku solar photovoltaic amaseli nge endaweni encane uzoba ongaphakeme amandla okukhipha futhi, ngokufanelekile, a ukushaja enjalo ayizwakali.
I ngobukhulu solar ukushaja ipharamitha iyona voltage okukhiphayo. Passport idatha amashaja enjalo kungaba voltages ezimbili - okusebenzayo kanye esiphezulu. Ngaphansi kusho esiphezulu akukho-umthwalo voltage, ke zizohluka kwezabantu isisebenzi ukuba mayelana 15-20 amaphesenti. Kunconywa ukuba ukhethe ishaja mobile, ibhethri solar oveza voltage yokusebenza elilingana (noma inkudlwana), voltage ezingu -plug iyunithi. Kulokhu, amandla ukushaja uyonika esiphezulu. Uma unquma ukuthenga ibhethri kudivayisi onamandla ngaphezu kudivayisi yakho iyadingeka, amandla ngokweqile uyomane zinyamalale. Nokho, ezimweni ephansi ukukhanya solar okukhipha ukushaja kuzoncishiswa, kulesi simo, kukhethwa amadivayisi nge kwenani Amandla ngempela kuthethelelwe. Nquma, yebo, wena.
Ngamafuphi. Ukukhetha kwenkokhiso, kubalulekile ukuba sinake hhayi kuphela umkhiqizo brand, design yayo, nokunye, ipharamitha ngokuyinhloko kufanele kube ukuthi ubukhulu solar cell afanayo. Kulokhu, uthola indawo enhle kakhulu futhi esebenza kahle ishaja ephathekayo, ibhethri solar okungakwazi ngesikhathi esifushane ukukhokhisa i amabhethri yakho noma ukunikeza ukusebenza okuqhubekayo tablet yakho, ikhompyutha ephathekayo, njll Nge ukushaja mobile ngisho epikinikini noma ukushaywa eside, uzokwazi ukusebenzisa amadivaysi kudingekile electronic ungenaso kulondolozwa kwebhethri.
Kanjani amandla okubhekana intukuthelo futhi ukuthi ukukwenza?
Corvette Ukuba 'ogxilile' 20380
360 Ubude Ukuphepha: ukubuyekezwa kanye izici
Ukuhlukaniswa kwe-cognac. Ukuhlukaniswa kwezinkanyezi zaseRussia naseFrance